Gabatee haaraa tokko saaga.
Tarjaawwan filataman haqa.
Tarreewwan filataman haqa.
Gabaticha ammaa fila.
Tarjaa ammaa fila.
Tarricha ammaa fila.
Bakka qubaannoo qareetti gabatee ammaa, bakka lamatti addabaassa. Maadhee gabatee tokko irra mirga-cuqaastee, ajaja kana keessa seenuu nidandeessa.
Qaaqa Bal'ina Tarjaa, bakka bal'ina tarjaa tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.
Hojjaa Tarjaa Gataa'aa
Tarjaawwan Qixaan Hiri
Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.
Qaaqa Bojjaa Tarree, bakka hojjaa tarree tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.
Hojjaa Tarree Gataa'aa
Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.
Qixaan Tardaalee Hiri
Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.
Qaaqa bakka ati barruucha filatame gara gabateetti jijjiiruu itti dandeessu bana.
Qaaqa bakka ati gabaticha filatame ammaa gara barruutti jijjiiruu itti dandeessu bana.
Foormulaa galchuu fi gulaaluudhaaf, Kabala Foormulaa bana.